FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA JACK-RAT TERRIER - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Jack-Rat Terrier
Alika mifangaro Jack Jack / Rat Terrier mifangaro
Lexi ilay olon-dehibe Jack-Rat Terrier — hoy ny tompony, 'Ny renin'i Lexi dia Amerikanina Rat Terrier voasoratra anarana ary ny rainy dia Jack Russell Terrier voasoratra anarana. Lexi dia 2 ½ taona amin'ity sary ity. Izy dia manana ny toetrany mahazatra amin'ny karazany terrier. Elaela ny fampiofanana, saingy lasa mpiara-mitory sy mpiambina mahafinaritra izy. '
Ny alika Jack-Rat Terrier dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Jack Russell ary ny Rat Terrier . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
'' Foxy no anarako ary ny milalao no lalaoko. Vehivavy Jack-Rat 7 volana aho izay maratra toy ny lohataona boaty! Tiako ny mitsambikina, mihazakazaka ary milalao. ary manana angovo tsy manam-petra mandritra ny tontolo andro. Hendry aho, mailaka ary mahery setra miaraka amin'ny toetra mampamirapiratra ary zotom-piainana. ”- Ny Foxy dia loharano nahafinaritra teo amin'ny fianakavianay. Foxy dia tsara miaraka amin'ireo zanakay lahy lahy. Tena mahay mandanjalanja izy, mikendry ny hampifaly ary te-ho anisan'ny hetsika ara-pianakaviana. Ary eny, manana switch switch izy. Afaka ny ho tonga ovy fandriana eo noho eo izy. Izy no tsara indrindra amin'ny alika mavitrika sy mifangaro. Mahafinaritra izy. '
Lucy the Jack-Rat Terrier amin'ny faha-4 taonany
Teraka i Diva ary nitaiza ny telo volana voalohany tao a tokotanin-trano mimanda miaraka amin'ny reniny, iray tam-po aminy ary alika kely 6 hafa. Rehefa nahazo azy aho nandritra ny telo volana, dia tsy nahomby izy ary saro-kenatra. Tsy nanatona ahy izy na nilalao ary tena tsy nahalala fomba. Sarin'i Diva amin'ny 9 volana ity. Ity sary ity dia taorian'ny niterahako an'i Diva nandritra ny 6 volana niaraka tamiko niara-nipetraka tamiko tamina tontolon'ny trano fonenana. Izany dia tamin'ny fotoana lasa alika 'MY' tanteraka. Tena lasa 'Alikan'i Dada' izy. Mahalana izy no miala amin'ny sisiko ary tia mandeha any amin'izay alehako. Mandehandeha tsara izy, mamaly ny baikoko, tia ny ety ivelany ary manenjika squirrels, tia olon-tsy fantatra, tia alika be, tsy mitabataba mihitsy noho ny hoe rehefa misy mandondona ary lasa fitiavana ny fiainako. '
'Hippie the Jack-Rat Terrier amin'ny 1.5 taona izao dia misy freckles maro kokoa, ary mahafatifaty toy ny taloha. Na dia alika hyper aza izy dia hipetraka milamina toy ny totozy eo am-pofoako rehefa eo amin'ny solosaina aho. Manohy mifandray amin'ireo saka antsika izy ary tia mandry amin'ny masoandro miaraka amin'ny zanany vavy, ny Beagle Reve. Miondrika ambony sezalava izy ary mijery TV miaraka aminay. Hihombo amin'ny alika hafa mihitsy aza izy rehefa eo izy ireo. Mijery ny Whisperer Alika sy horonan-tsary mampihomehy an'ny biby fiompy izahay. Ireo no seho tiany indrindra. Manohy manamboatra azy amin'ny alina aho ary tsy any an-trano, satria te hahafanta-javatra izy. Ity tokoa no alika tsara indrindra azoko tiavina. Izy sy Reve dia mpivady mahafinaritra tokoa. Tiako ireo namako! '
Hippie ilay Jack-Rat fotsy sy mainty toy ny alika kely amin'ny 6 volana— 'Mbola faly sy matanjaka be foana izy. Ny fisedrana sy ny lesoka dia nanjary fahitana fa ny rawhides lava mihodina no mifanentana indrindra amin'ny orony kely sy valanorano kely ary tiany tazonina eo anelanelan'ny lambany sy ny moka amin'ny zoro iray izy. Ny tokotanin'ny fefy dia manome toerana malalaka hilalaovana azy ary ny vavahady zazakely dia mitazona azy tsy ho voaro amin'ny faritra filalaovana anatiny. Raha mieritreritra ny hanana an'ity karazana hybrid ity ianao dia miomàna hanara-maso mandritra ny volana maro, satria mpikaroka izy ireo ary milalao ary mety haka kilalao tsy mendrika. Ny biby kely tototry entana tsy misy bokotra na zavatra kendaina no tena tianao atsipy eraky ny rivotra sy misambotra. Ririnina eto ary ny alika kely mahia volo toa ny terriers dia mangatsiaka mora foana. Ny lambam-pandriana mafana sy lamba firakotra ao anaty trano akaikin'ny faritra mafana no mety indrindra amin'ireto fako kely sy fifaliana ireto. Tena alika mahay tokoa, manana fikarakarana kely manaikitra kely, ary hianatra fika amin'ny alàlan'ny fiderana zaza, oroka, ary sombin-kanina mahafinaritra izy ireo. Raha izany no alika ho anao, rehefa tonga any an-trano ny zazakelinao, misakambina sy milalao miaraka amin'izy ireo matetika, manam-paharetana, manome dera ary hitohy ho be fitiavana mandritra ny androm-piainany izy ireo. '
Hippie ilay fotsy sy mainty Jack-Rat Terrier amin'ny maha alika azy amin'ny 10 herinandro - 'Ity no alikakely marani-tsaina indrindra ary tiany ny mitazona ny lohany eo an-tsorokao. Ankehitriny efa ho 3 volana izao dia tiany ny milalao miaraka amin'ny zanakay 6 sy ny biby hafa (saka Smokey sy Beagle Reve). Beagle sy Jack dia mifankahazo tsara! '
Rufus the Jack-Rat Terrier (fangaro Jack Russell / Rat Terrier) amin'ny faha-7 volana— 'Rufus dia vonona hilalao foana !!'
Maggie the Jack-Rat Terrier (Rat Terrier / Jack Russell Terrier mix) milentika alika masoandro, ny fialam-boly tiany indrindra
Maggie the Jack-Rat Terrier (Rat Terrier / Jack Russell Terrier mix) alika kely
Roxy ilay fotsy misy teboka mainty Jack-Rat Terrier — ny rainy dia Jack Russell ary Rat Terrier ny reniny. Tena tsy fahita firy amin'ireo alika ireo ny saika fotsy daholo.
Hijery ohatra misimisy momba ny Jack-Rat Terrier
Jack-Rat Terrier Sary 1
manao ahoana ny alika pyrenees
sarin'ireo mpiandry ondry alemanina mpanjaka
alika mpiandry ondry any Kaokazy rosiana
karazana terriers omby isan-karazany
pomeranian shih tzu afangaro alika kely